General | Myanmar My Always
Some or many of ardent activists might not see the meaning of my praise to former powerful General and Intelligent Chief Khin Nyunt who effectively made the countryaliving hell by many wicked schemes during his time from 1988 … Continue reading →
I believe all Myanmar citizens are elated with the gracious news of freeing most of the political prisoners and all hope that the remaining prisoners of political conscience are going to free until all are free withinafew weeks. … Continue reading →
Today,atangible and graceful act of good deed is finally done by the President U Thein Sein using his Presidential authority to free all or most of the popular political prisoners. If the government accept those prisoners as political … Continue reading →
၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက် အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ မင်္ဂလာကြက်သရေအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းပါစေ၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းမြေ့ကြည်သာကြပါစေ၊ မတောင့်မတ မကြောင့်မကျရပဲ အသက်မွေးမှု ပြုနိုင်ကြပါစေ၊ တိုင်းနဲ့အဝှန်း ကမ္ဘာနဲ့အဝှန်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ ပဏာမ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီနေ့ညသန်းကောင်ယံမှာ ၂၀၁၁ ခုက နောက်မှာ ချန်ပြီးနေခဲ့တော့မယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဒို့မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေ ဘယ်ကိုမူတည် ဦးတည်ပြီးပြောင်းခဲ့သလဲ။ အဲဒီအပြောင်းအလဲတွေက လူတွေအတွက် ဘယ်လောက် အရေးပါတဲ့ ပြောင်းလဲချက်တွေလဲ။ ကျနော်မြင်သလောက် ကျနော် ပြန်ကြည့်မိတယ်။ ၁။ ကမ္ဘာကြီး ထူးထူးခြားခြား … Continue reading →